China Colour coated tile t-tile sy mpanamboatra | Lueding
Nandrisika Steel Coil
Coil / PPGI vita amin'ny vy vita amin'ny loko
Takelaka tafo mitafo fanitso
Tile vita amin'ny zinc
Tile vita amin'ny glazed miloko
T-tile vita amin'ny rindrina mifono loko
Coil Steel vita miloko efa vita miloko / PPGI 315
Ny tafo mitafo vita amin'ny vy vita amin'ny vy dia vita amin'ny lokon-taratasy mifono loko sy ravina vy nandrisika ary namboarin'ny Roll Forming Machine.
Halavany: 1.8m ka hatramin'ny 12m
Araka ny endriny isan-karazany dia mizara ho tile tile miendrika T, taila mihombo, taila manjelanjelatra sns.
Araka ny metaly metaly hafa dia azo zaraina ho valon-drindrina mifono loko izy io, fonosana tafo mitafo mitafo vita amin'ny galvanitra ary tafo vita amin'ny galvalume.
Vidin'ny FOB: US $ 600 - 900 / taonina
Min.Order Quantity: 25 taonina
Fahaizana manome: 20000 taonina isam-bolana
Seranan-tsambo: Tianjin, Qingdao
Takelaka vita amin'ny tafo mitafo vita amin'ny loko
● Ny ravina tafo mitafy loko dia vita amin'ny coil vy mifono loko ary ahodinanan'ny Machine Roll Forming.
● Ny fitaovan'ny loko vita amin'ny loko dia ny loko PE, izay manana ny mampiavaka ny vidiny ambany, ny loko isan-karazany ary ny fanoherana ny hafanana avo.
● Ny loko Nippon sy Akzo Nobel dia azo namboarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ny firakotra vita amin'ny ravina mifono loko dia vokatra azo amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny ravin-tsolika mangatsiaka na ny fantsom-by vita amin'ny vy vita amin'ny fitsaboana simika an-tampon'ny (horonam-peo) na ny firakotra voajanahary voajanahary (toy ny firakotra PVC) ary avy eo ny fanaovan-tsakafo sy ny fanasitranana.
Ny vy ao anatiny dia ravina mangatsiaka voahodina, takela-by mirary vy mafana, ary firakotra vy aluzinc. Ny karazana fandrakofana dia azo sokajiana ho polyester, polyester vita amin'ny silikonika, polyvinylidene fluoride, ary plastisol. Ny fipetraky ny ravin-doko nopetahany loko dia azo zaraina ho ravina mifono miolakolaka, ravina vita amin'ny embona vita amin'ny metaly ary ravin-doko mitafo.
Ny lambam-pandriana mifono loko ho an'ny fananganana amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny takela-by miraviravy mafana sy ny ravina vy aluzinc mafana. Izy ireo dia voahodina ho takelaka manify na ravin-sandwich miaraka amin'ny polyurethane ary ampiasaina amin'ny fananganana tranobe indostrialy sy ara-barotra toy ny atrikasa fananganana vy, trano fanatobiana entana ary vata fampangatsiahana. Tafo, rindrina, varavarana.
● Ho an'ny tafo vy mitafoona PPGI miaraka amin'ny ain'ny serivisy 25 taona no ho miakatra, ny polyvinylidene fluoride (fluorocarbon PVDF) dia tokony hampiasaina ho an'ny karazana loko.
● Ho an'ny tafo mitafo vita amin'ny vy vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny loko 15 taona na mihoatra, ny karazana loko dia tokony hampiasa polyester vita amin'ny silikone na polyester mahatohitra toetr'andro.
● Ho an'ny tafo mitafo vy miloko na tafo vetivety miaraka amin'ny fiainana 10 taona na mihoatra, polyester dia ampiasaina amin'ny karazana loko.
Teo aloha: T-tile vita amin'ny rindrina mifono loko
Manaraka: Tile vita amin'ny glazed miloko
A: Izahay dia orinasan-jiro vy nandrisika, coil vy Aluzinc, PPGI ary ravina tafo.
F: Ahoana ny kalitaonao?
A: Ny kalitaonay dia tsara sy milamina. Ny taratasy fanamarinana kalitao dia havoaka isaky ny entana.
F: Aiza ny tsenanao lehibe?
A: Ny tsenanay lehibe dia ny Moyen Orient, Afrika, Azia atsimo atsinanana, India, Japon, sns.
F: Inona ny fepetra andoavanao vola?
A: 30% T / T mialoha, mandanjalanja alohan'ny fandefasana entana na 100% L / C amin'ny fahitana.
Takelaka tafo mitafo fanitso vaovao